Liisaska IPTV ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay | ListaIPTVtelevision.com
IPTV Qeybaha Pro
Laatiinka IPTV M3U
IPTV M3U Dadka Waaweyn
Ciyaar xikmad leh
Liisaska IPTV ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay
Mid ka mid ah tignoolajiyada beddelay habka aan u isticmaalno nuxurka madadaalada waa IPTV.
Liisaska kanaalka caanka ah ee IPTV ee bilaashka ah waa mid ka mid ah noocyada faylalka ugu badan ee la raadiyo 2022. Iyo sabab wanaagsan.
Halkan kala soo deg liisaska bilaashka ah
Hab-maamuuska TV-ga IP (oo loo soo gaabiyo IPTV) Waa madal muujinaya faa'iidooyin badan marka loo eego talefishanka dhaqanka, iyo xitaa talefishanka satalaytka.
Si aad u fahamto faa'iidooyinka ay leedahay oo ku tuso sida loo helo liisaska la cusboonaysiiyay, si aad u hesho kanaalada Spain ama qaar Latin ah, iyo inaad ogaato waa maxay nidaamkan ku jira Smart TV-gaaga ama PC-gaaga, waxaanu soo saarnay agabkan soo socda.
Waa maxay IPTV iyo sidee buu u shaqeeyaa?
IPTV waa nidaam qaybinta walxaha maqal-muuqaalka ah kaas oo ka faa'iideysanaya xajmiyeedka si uu u gudbiyo nuxurka.
Si ka duwan sida loo sii daayo OTT (Over The Top), IPTV waxay si gaar ah u isticmaasha bandwidth u go'an ujeedadan, si kanaalada ay xawaarahooda cusboonaysiiyaan, markaa ma jiraan wax laalaad ah ama goyn ah gudbinta.
Sannadka 2022 waxa uu ahaa sannadkii la xoojiyay madal noocaan oo kale ah, kaas oo had iyo jeer la socda adeegga internetku si uu si sax ah u shaqeeyo, maadaama uu ku jiro baaxadda qorshayaasha internet-ka ee la horumariyo.
Sababtaas awgeed, Telefiishanka IPTV waxaa badanaa la bixiyaa bilaash iyadoo lala kaashanayo qorshaha fiber-ka, waxayna ku xiran tahay xawaaraha qorshaha, waxaad awoodi doontaa inaad doorato inaad leedahay qeexitaan caadi ah (SDTV) ama qeexitaan sare (HDTV) kanaalkaaga iyo barnaamijkaaga dhamaystiran.
Tignoolajiyada IPTV ee Spain maaha mid cusub, waxaana jiray goobo sannado ah qaarkood oo isku dayay inay bixiyaan liisaska barnaamijka oo dhammaystiran, had iyo jeerna lacag.
Hadda, Movistar+ waa tusaalaha ugu fiican ee IPTV gudaha Spain, oo u taagan kanaalada gudbinta ee dhacdooyinka gaarka ah, sida Partidazo caanka ah.
Si kastaba ha ahaatee, sida aynu horeba u soo sheegnay, maaha tignoolajiyada bilaabmaya in lagu dhaqo dalka, mana aha dhammaan ururrada Laatiinka.
Jazztel wuxuu ahaa mid ka mid ah hormoodka, oo ay weheliyaan Movistar, farsamadan Spain. Jazztel TV iyo Yacom waxay ahaayeen laba adeeg oo borotokoolka internetka ah, in kasta oo aanay hadda jirin.
Laatiin Ameerika, Movistar Chile iyo ETB (Colombia) waa labada shirkadood ee sameeyay ballanqaadka ugu weyn ee tignoolajiyadan fog, taas oo aan u daadajin doono faa'iidooyinka ay u leedahay isticmaalaha. Haa, adiga.
Faa'iidooyinka nidaamka maanta
Madalkan fog ee lagu daawado talefiishanka sanadka 2022, oo si wayn kor ugu kacaya Smart TV-yada iyo PC-yada, waxa ay leedahay faa'iidooyin badan oo ay tahay in aan dib u eegis ku samayno, maadaama ay kuwani yihiin kuwa keena dad badan oo xiiseeya adeegyada IPTV, ama rakiba codsiyada daawo liiska kanaalka 2022.
Waxa ku jira dhammaan aaladaha
Mid ka mid ah faa'iidooyinka lagama maarmaanka ah ee tiknoolajiyada fog ayaa ah, si sax ah sababtoo ah waxay ku salaysan tahay bandwidth, si sax ah ayaa loo heli karaa oo loo gudbin karaa qalab kasta oo ku xiran internetka.
Khasabna maaha shabakada guriga, sababtoo ah adeegyo badan ayaa leh calaamado iyada oo loo marayo codsiyada mobilada ee la cusboonaysiiyay kuwaas oo xitaa loo isticmaali karo qorshaha xogta mobaylka. In kasta oo aan lagu talin isticmaalka xogta apps-kan la cusboonaysiiyay awgeed.
Waxaa hubaal ah suurtagalnimada ku arag waxa ku jira Isbaanishka, Isbaanishka Laatiinka ama Ingiriisiga, nuxur gaar ah iyo nooc kasta oo ka mid ah Smart TV, on Android ama iOS mobile, ama barnaamijka PC, waa faa'iido mudan in la isku dayo.
channels gaar ah
Faa'iidada kaliya ayaa ah in aan la qaadin barnaamijyada fog fog, meel kasta iyo dhammaan qalabka.
Faa'iidada muhiimka ah ee IPTV, gaar ahaan sanadka 2022, waa suurtagalnimada gelitaanka kanaalada iyo waxyaabaha gaarka ah. Oo ma channels dabacsan, laakiin liisaska barnaamijyada IPTV oo dhammaystiran.
In kasta oo ay yihiin goobo lacag-bixineed, waxay bixiyaan waxyaabo aan meel kale laga arki karin, sida horyaallada ugu muhiimsan adduunka kubbadda cagta, tusaale ahaan. Laakin intaas waxaa dheer in aan wadan walba u hayno xogo kala duwan, waxaan idiinkaga tagaynaa linksyada adigoo gujinaya calanka dalka aad ka rabto hoos:
Liiska IPTV m3u ee Argentina oo bilaash ah oo la cusboonaysiiyay
Liiska IPTV m3u ee Brazil oo bilaash ah oo la cusboonaysiiyay
Liisaska IPTV m3u ee Chile Bilaash iyo La cusboonaysiiyay
Liisaska IPTV m3u ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay ee Colombia
Liisaska IPTV m3u ee Ecuador bilaash ah oo la cusboonaysiiyay
Liiska IPTV m3u ee Isbaanishka Bilaash iyo La cusboonaysiiyay
Liisaska IPTV m3u ee Mexico waa bilaash oo la cusboonaysiiyay
Liiska IPTV m3u ee Maraykanka oo bilaash ah oo la cusboonaysiiyay
Sidaa darteed, haddii aad taageere u tahay kanaalada anime ee Japan, shineemo Latin, ama Liiska IPTV ee la cusboonaysiiyay ee lagu daawado kubbadda cagta Xilliga 2022 ee kuwa rukhsad u haysta inay sidan u baahiyaan, tignoolajiyada fog ee IPTV waa xalka, sababtoo ah kaliya ma heli doontid dhammaan waxyaabaha lagu xusay illaa iyo inta aad haysato Movistar + premium oo aad bixiso, tusaale ahaan, laakiin 2022 tignoolajiyadan fog waxay noqon kartaa bilaash. Haa, bilaash ah marba haddii uu sharci ka yahay dalkaaga oo waxa ku jira ay furan yihiin xuquuqahana laguu qoondeeyay si aad sidaas u sameyso.
Soo jeedin aan xadidnayn
Bixinta telefishinka IPTV ee casriga ah wax ay wadaagaan: kala duwanaansho aan hore loo arag.
Barnaamijyada fogfoggu waxay bixiyaan faa'iidooyin ay ka mid yihiin suurtagalnimada in lagu daawado dhammaan kanaalada baaxadda deegaanka ama gobolka, kanaal kasta oo Laatiinka ah, kanaalada Boqortooyada Midowday ama Mareykanka, iyo nidaamka telefishinka ee Yurub iyo Aasiya.
Xadka madadaalada adigaa dejiyay.
Liisaska bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay ee IPTV
Liisaska IPTV ee bilaashka ah waa faylal loogu talagalay PC iyo TV-yada Smart (iyo guud ahaan, barnaamijyada IPTV) ee kaydiya macluumaadka dhamaystiran ee waxa ku jira iyada oo loo marayo qulqulka (serverrada fog) ee kanaalada telefishinka ee kala duwan.
Faa'iidada liisaskani waa inay hayaan macluumaadka cusub ee kanaalada bilaashka ah, laakiin sidoo kale kanaalada lacagta lagu bixiyo ilaa inta aad xaq u leedahay inaad sidaas samayso iyo kuwa kale sida:
Liisaska Kanaalka Dadka Waaweyn
Laga soo bilaabo ciyaaraha sida kubbadda cagta, UFC ama kubbadda kolayga
Si aad u aragto Movistar Plus haddii aad leedahay Movistar + Premium
Liisaska dhammaan waxyaabaha khidmadaha ah haddii aad leedahay xuquuqaha
Habkaas, waxaad u heli kartaa Movistar+ kombuyuutarkaaga ilaa inta aad ka bixinayso iska-diiwaangelintaada Movistar, kanaalada filimada Latinka (ama kanaal kasta oo Laatiinka ah), iyo barnaamij kasta oo gaar ah oo qalabkaaga ah.
Faylashan ay ku jiraan macluumaadka barnaamijka ayaa ku jira qaabka m3u, waxaana lagu shubaa arjiyada ku ciyaara waxyaabaha talefishinada ee Internet Protocol IP, kuwaas oo VLC, ama SSIPTV ee pc iyo liisaskiisa la cusboonaysiiyay waa kuwa ugu caansan, in kasta oo waayadan dambe ay kor u kacday Ciyaar xikmad leh.
* Xidhiidhiyayaasha qaar oo ay ugu wacan tahay tirada badan ee taraafikada soo galaya ayaa laga yaabaa inaanay shaqayn wakhtigan, isku day dhamaantood. Midka leh badhanka buluuga ah ayaa had iyo jeer shaqeeya. Si loo ilaaliyo xasilloonida isku xirka ilaa inta suurtogalka ah, waa la ilaaliyaa, si aad u gasho waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso.
Liisaska Ciyaaraha IPTV (La cusbooneysiiyay 2022)
Liisaska Isbaanishka IPTV (La cusbooneysiiyay 2022)
Liisaska IPTV ee Laatiinka ah (la cusbooneysiiyay 2022)
Liisaska IPTV ee dadka waaweyn +18 (la cusbooneysiiyay 2022)
Liisaska Filimka IPTV (La cusbooneysiiyay 2022)
Liiska Taxanaha IPTV (La cusbooneysiiyay 2022)
Waxaad ku arki kartaa kanaalo kale oo gaar ah maqaallada soo socda:
Liisaska TV-ga Exabyte ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay
Liisaska Xad-dhaafka ah ee IPTV ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay
Liisaska Dadka Waaweyn ee M3U ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay
Liisaska Laatiinka M3U ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay
Liisaska Movistar IPTV M3U oo bilaash ah oo la cusboonaysiiyay
Liisaska Pro ee Smarters IPTV ee bilaashka ah oo la cusboonaysiiyay
Sida loo habeeyo liisaska bilaashka ah ee IPTV
Suurtagalnimada in la habeeyo Smart TV, barnaamijka PC ama codsiga moobilka waa cajiib. Aan ku koobnayn Smart TV in la daawado TV-ga, waa wax cajiib ah.
Marka la gaadho 2022, meelahan fog iyo kuwa casriga ahba waxay leeyihiin agab software oo la jaanqaadi kara dhammaan aaladaha.
Tusaale ahaan, waxaa jira barnaamijyo loogu talagalay kombuyuutarrada nidaamka hawlgalka kasta. Windows PC waxaa jira habab kale oo loogu talagalay 32-bit iyo 64-bit processors, lacag-bixinno iyo bilaash ah, iyo sidoo kale PC-yada leh tignoolajiyada dib-u-celinta HD liisaska m3u oo la cusboonaysiiyay oo bilaash ah.
Marka laga hadlayo Smart TV-yada, waxaa jira codsiyo asal ah oo loogu talagalay noocyada ugu caansan ee TV-yada Smart. Tusaale ahaan, abka la cusboonaysiiyay ee TV-yada Smart ee taageera TV-yada fog-fog waxay bixiyaan abka Samsung, Philips, Sony, Hisense, Panasonic, iyo LG.
Marka laga soo tago barnaamijyada PC iyo Smart TV, talefannada gacanta iyo Apple TV ama Android Box waxaad sidoo kale heli doontaa codsiyada la cusboonaysiiyay si aad ugu raaxaysato macluumaadkan.
Aad u xiiseeya kombayutarada iyo shaleemada. Injineer Kombuyuutar oo isku daya inuu nolosha u fududeeyo kuwa jecel filimada, musalsalka iyo daawashada TV kasta onlayn.
06 / 06 / 2019 at 19: 01
Hello, sida loo haysto liiska ottplayer, kan waan ku cusubahay. Mahadsanid
admin isagu wuxuu leeyahay:
24 / 06 / 2019 at 16: 40
Bogga OTTPlayer: https://listaiptvtelevision.com/ottplayer-listas-gratis-para-pc/
Tony isagu wuxuu leeyahay:
04 / 11 / 2019 at 02: 28
fiid wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan is diiwaan geliyo laakiin ma garanayo sida, mahadsanid
Joseph Lopez isagu wuxuu leeyahay:
04 / 11 / 2019 at 19: 59
Waxaa lagu sharaxay kor.
edilberto arcila isagu wuxuu leeyahay:
23 / 06 / 2019 at 18: 09
Liiska Meu ee leh snail iyo rcn deggan oo xor ah
31 / 08 / 2019 at 18: 09
Waxaan rabaa sheyga xasiloon si bilaash ah, ma daneeyo haddaan daawado, xitaa haddii la gooyo daqiiqad kasta waa u qalantaa
04 / 09 / 2019 at 17: 21
Maripaz isagu wuxuu leeyahay:
18 / 09 / 2019 at 23: 59
liisaska ssiptv ee bilaashka ah
Patrick Zambrano isagu wuxuu leeyahay:
25 / 04 / 2020 at 21: 36
sidee ku heli karaa liiska m3u ee kodi
01 / 09 / 2019 at 01: 18
Galab wanaagsan, waan kuu hambalyeynayaa, wanaagga waan ka masayray
Anthony isagu wuxuu leeyahay:
19 / 09 / 2019 at 21: 49
Sidee bay u saamaysaa dhicitaankii Xtream?
23 / 09 / 2019 at 08: 46
Wax dhibaato ah ma jiraan.
aaron isagu wuxuu leeyahay:
01 / 10 / 2019 at 19: 41
Sideen ku heli karaa liisaska ssiptv??
Marcelo Gustavo del Valle isagu wuxuu leeyahay:
30 / 09 / 2019 at 03: 54
Hello, ma ii gudbin kartaa URL-ka SSIPTV fadlan, mahadsanid?
Walfri isagu wuxuu leeyahay:
30 / 09 / 2019 at 17: 13
Iptv waa kan ugu xasiloon kanaalada had iyo jeer waxaan dhib ku qabaa telemundo, univision iwm
02 / 10 / 2019 at 16: 33
Fadlan ii sheeg sida aan ugu xidhi karo ssiptv-gayga liiskaaga?? Aad baad u mahadsantahay
07 / 10 / 2019 at 02: 37
Waxaan u baahanahay liisaska ssiptv ee ciyaaraha Isbaanishka iyo Ingiriiska, qof i caawin kara ama ciwaanka ila wadaagi kara fadlan...!
Masiixa isagu wuxuu leeyahay:
14 / 10 / 2019 at 11: 46
sidee ku heli karaa code-yada itv ee tv-ga
14 / 10 / 2019 at 11: 47
waan ka xumahay furayaasha itpv, yaan kula soo xidhiidhi karaa koodka aaladaha iyo tv-ga
Simon isagu wuxuu leeyahay:
16 / 10 / 2019 at 09: 23
Sideen ku heli karaa liiska iptv ee TV-ga smart
Waxaan rabaa liisaska iptv ee TV-ga smart
30 / 11 / 2019 at 19: 29
salaamu calaykum si aad u daawato kubbada cagta Argentina bilaash
LUIS A. GARCIA NUNEZ isagu wuxuu leeyahay:
28 / 12 / 2019 at 20: 12
sida loo helo liisaska furan… Waxaan ka imid Nuevo Leon, Mexico… ee Smart TV-gayga?
Raul Rios isagu wuxuu leeyahay:
26 / 01 / 2020 at 13: 21
Ma ii sheegi kartaa haddii codi wali shaqaynayo.. mahadsanid
28 / 01 / 2020 at 09: 50
Haa, wali way shaqeysaa.
08 / 03 / 2020 at 19: 41
hello ma ii soo gudbin kartaa url-ka ssiptv mahadsanid
Mauro isagu wuxuu leeyahay:
12 / 03 / 2020 at 13: 26
hello subax wanaagsan hadda waxaan noqday xubin hadda sideen u daawadaa formula one
aad baad u mahadsantahay mauro reer uruguay
Fali isagu wuxuu leeyahay:
31 / 01 / 2020 at 20: 24
Haye meeye. Waxaan u heli karaa Liiska bilaashka ah ee AppSSiptv LG TV, mahadsanid
micaela p isagu wuxuu leeyahay:
21 / 02 / 2020 at 16: 59
Hello, ma jiraa codsi lagu daawado kanaalada Uruguay, Argentina, kubbadda cagta ee sanduuqa tv-ga Android 9.0
manuel benites isagu wuxuu leeyahay:
07 / 04 / 2020 at 02: 20
Hello su'aal wanaagsan sideen ku heli karaa liiska iptv ee bilaashka ah
01 / 05 / 2020 at 02: 22
Ma i siin kartaa liiska iptv ee kanaalada carruurta iyo filimada 2020
boqortooyada isagu wuxuu leeyahay:
06 / 05 / 2020 at 23: 15
Waxaan u baahanahay IPTV dhab ah oo leh kanaalada Argentina haddii qof uu garanayo fadlan ii soo qor
Mick isagu wuxuu leeyahay:
04 / 08 / 2020 at 13: 16
Waxaan raadinayaa liiska kanaalada Shiinaha, Hong Kong, Taiwan...
Ma garanaysaa shabakad leh?
Mahadsanid iyo salaan wacan.
JOHN SANCHEZ isagu wuxuu leeyahay:
10 / 09 / 2020 at 00: 17
FADLAN M3U LIISKA DUPLEX IPTV
Yulianaana isagu wuxuu leeyahay:
11 / 10 / 2020 at 14: 08
Waxaan rabaa inaan ogaado liiska ss iptv kanaalka Colombian fadlan
Kleber Collaguazo isagu wuxuu leeyahay:
27 / 10 / 2020 at 14: 32
Ka warran waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii soo dejinta app-ka aan u dhalan tv-ga smart ay waxyeeleyso qalabkayga
02 / 11 / 2020 at 20: 59
Ma waxaad u jeedaa waxaa abuuray horumariyayaal dibadda ah? Maya, waa sida talefanka Android, wax kasta oo aad Play Store ka soo dejiso waxa samaysa shirkad aan Android ahayn.
RAPC1357 isagu wuxuu leeyahay:
13 / 11 / 2020 at 04: 46
waa maxay url ee ciyaaraha tyc?
14 / 12 / 2020 at 21: 41
Kaas oo noqon lahaa midka ugu xasiloon ee aan dan ka lahayn in aan bixiyo ilaa iyo inta aysan joojin
carmenza isagu wuxuu leeyahay:
27 / 01 / 2021 at 14: 20
Galab wanaagsan, waxaan haystaa Sony Bravia mana rakibi karo liis kanaalada Isbaanishka ama Laatiinka ah, had iyo jeer waxaan helaa Conexion Failed, fadlan ma i caawin kartaa? mahadsanid
Joan isagu wuxuu leeyahay:
18 / 02 / 2021 at 22: 35
Sideen ku heli karaa liiska kanaalada iga caawi fadlan?
22 / 02 / 2021 at 15: 52
Waxaad haysataa liiska dhammaan kanaalada iptv-ga qaaliga ah ee halkaas compi.
Wilson Betancourt isagu wuxuu leeyahay:
27 / 03 / 2021 at 21: 13
Hi, waxaan ahay Wilson Betancourt.
Waxaan ka imid Kolombiya, waxaan ahay quadriplegic ka dhashay shil in ka badan 20 sano ka hor, mana haysto telefishinka fiilada dhibaatooyinka dhaqaale.
Waxaan rabaa in aan helo liis m3u gaar ah oo deggan oo waara, ee smar tv
oo leh channels premium, laakiin ma awoodin si kasta oo aan isku dayay.
Fadlan i bar sida loo sameeyo, waligey ayaan u mahadcelin lahaa.
jawaab. [emailka waa la ilaaliyay]
Filip isagu wuxuu leeyahay:
09 / 04 / 2022 at 23: 25
Hello, ma ii gudbin kartaa liis aan ku daawado F1 bilaash?
© 2022 ListaIPTVtelevision.com Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiinQaanuunka Arrimaha Khaaska ah ogeysiis Legal Contacto Siyaasadda cookies Cidda aan nahay